Cabdi Xaashi oo loo doortay Guddoomiyaha 'Aqalka Sare' ee Dowladda Federaalka.
Sunday January 22, 2017 - 12:26:49 in Wararka by Super Admin
Waxa loogu yeero odayaasha aqalka sare ee dowladda Federaalka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho uga dhawaaqay in ay doorteen hoggaan Cusub.
Doorashada guddoomiyaha ‘Aqalka sare’ waxaa loo lamayay laba musharax oo kala ah Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mustafa Max’med Qodax.
Guddiga doorashada ayaa sheegay in guddoomiyaha cusub ee ‘Aqalka sare’ uu yahay Cabdi Xaashi C/llaahi wuxuuna ka guuleystay musharaxii la tartamayay.
Ninka guddoomiyaha ‘Aqalka sare’ loo doortay ayaa caan ku ahaa hadallo uu dhowr mar warbaahinta ka sheegay oo ahaa in dalka Soomaaliya uu kujiro gumeysi cad oo Itoobiya iyo Kenya geliyeen.
"Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in dalku uu gumeysi kujiro, aniga oo xildhibaan qaran ah mageli karo xerada Xalane marka sideen dowlad madax banaan ku sheeganaynaa” ayuu yiri Cabdi Xaashi oo horay u ahaa xildhibaan.
Siyaasiyiinta dowladda Federaalka ayaa marka laga qaado xilalka ay hayaan Afka furta oo sheega in dalku gumeysi kujiro balse marka ay xilal qabtaan ayay gumeystayaasha soo duulayaasha ku tilmaamaan dal xureeryayaal ah!.
Doorashadan ayaanimaanaysa xilli is qab qabsi xooggan uu kajiro doorashooyinka madaxtinimada dowlada Federaalka waxaana jira musuq maasuq iyo laaluush bixin ay ku howlanyihiin saraakiisha Ururka Damul Jadiid ee Xasan Sheekh Madaxda ka yahay.
Dowladda Kenya Oo Hadashay Weerarka Ka socda magaalada Nairobi.
Al Shabaab Oo Weerar Saf ballaaran ah ku qaaday Ciidamada dowladda ee ku sugan Magaalada Marka.